शंकास्पद भन्दै गायिका आनीको १५ करोड बैंकले गर्यो 'रोक्का', फुकुवा गर्न प्रधानमन्त्रीकै दबाब :: BIZMANDU
शंकास्पद भन्दै गायिका आनीको १५ करोड बैंकले गर्यो 'रोक्का', फुकुवा गर्न प्रधानमन्त्रीकै दबाब
प्रकाशित मिति: Jun 4, 2019 4:03 PM
काठमाडौं। चर्चित गायिका आनी छोइङ डोल्माले स्रोत नखुलेको 'शंकास्पद' पैसा भित्र्याएको भन्दै एक बाणिज्य बैंकले रोक्का गरिदिएको छ। बैंकिङ प्रणालीबाटै विदेशबाट ल्याइएको पैसाको स्रोत नखुलेपछि मेगा बैंक नेपालले पैसा रोक्का गरेको हो।
आनीले हङकङको 'एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी' मा कार्यरत एक ब्यक्तिबाट १५ लाख डलर (विनिमय दर १०० रुपैयाँका हिसाबले १५ करोड रुपैयाँ) नेपाल ल्याएकी थिइन्। बैंकमा आनीका नाममा एकै पटक ठूलो रकम आएपछि त्यसलाई शंकास्पद भन्दै मेगाले राष्ट्र बैंकमा रहेको 'वित्तीय जानकारी इकाइ' लाई खबर गरिदिएको थियो।
पैसा रोकिएपछि आनीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको 'तुइन विस्थापन कार्यक्रम'लाई एक करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेकी थिइन्। यो कार्यक्रमको फाइलमा ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरवार छिर्दाछिर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए। दुई बर्षभित्र तुइन विस्थापित गर्ने उद्देश्य थियो। ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर आउँदा पनि तुइन विस्थापित भएको थिएन। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने 'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रममा आनीले ओलीलाई एक करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेकी थिइन्।
राष्ट्र बैंकमै रहे पनि वित्तीय जानकारी इकाइ स्वायत्त संस्था हो। बैंकले पठाएको 'सस्पिसिएस ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट (एसटिआर)' लाई इकाइले शुद्धिकरण विभाग पठाइदिएको थियो। यसमा राष्ट्र बैंकका कुनै पनि विभाग तथा अधिकारीहरु प्रत्यक्ष संलग्न हुन पाउँदैनन्। तर आनीको पैसा छुटाउन भने विदेशी विनिमय विभागका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु नै लागिपरेका थिए। विभागमा 'रिपोर्ट' पुगिसकेकाले पैसा फुकुवा गर्न भने सफल भएका थिएनन्।
'भित्रभित्रै दबाउने प्रयास धेरै भएको थियो तर अनुसन्धानको चरणमा पुगेकाले गाह्रो भएको छ' एक उच्च अधिकारीले भने, 'यो पैसा फुकुवा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीदेखि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु समेत लागिपरेका थिए।' उनका अनुसार शंकास्पद भनेर रिपोर्ट भइसकेको पैसामा अनुसन्धान नै गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा 'शक्तिशाली' हरु थिए।
उनले करिव ४० करोड रुपैयाँ भित्र्याउन राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिइसकेको केन्द्रीय बैंक स्रोतले जानकारी दियो। होटलका लागि पनि ब्यक्तिगत स्रोतबाट पैसा ल्याउन लागेको आनीले बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ। मेगा बैंकले 'फ्रिज' गरिदिएको १५ करोड रुपैयाँ उनले रेमिटेन्सको रुपमा भित्र्याउन खोजेकी हुन्। जबकी मेगा बैंकले रकम फ्रिज गर्नु केही महिनाअघि मात्रै आनीलाई राम्रो ग्राहक भन्दै सम्मान गरेको थियो।
मेगा बैंकमा 'फ्रिज' भएको १५ करोड रुपैयाँ फुकुवा गर्न उनले राष्ट्र बैंकमा कागजपत्रहरु बुझाइरहेको त्यहाँका अधिकारीहरुले बताए। 'शंकास्पद भनेर खबर आइसकेकाले त्यस बारेमा शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ' राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, 'शंकास्पद नै भेटिए कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ। वैधानिक स्रोत देखिएमा पैसा फुकुवा हुनसक्छ।'
शंकास्पद भन्दै गायिका आनीको १५ करोड बैंकले गर्यो 'रोक्का', फुकुवा गर्न प्रधानमन्त्रीकै दबाब को लागी ४ प्रतिक्रिया(हरु)
rames[ 2019-06-05 09:31:41 ]
यो सुचना बैंकले दिएको हो। किनभने यो पैसा बैंकलाई घाँडो भइरहेको थियो। यो ब्याङक खत्तम छ। अहिले पनि घुस खाएर निक्षेप राख्छ। अस्ति भर्खरै गौतम बुद्ध विमानस्थलको पैसा पनि घुस दिएर आफ्नोमा राखेको छ।
शिव[ 2019-06-05 08:36:37 ]
हैन राष्ट्र बैक स्वयमले ग्राहकका यस्ता सुचना अति नै गोप्य राख्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्छ,तेही राष्ट्र बैकले यस्तो खाले अभिव्यक्ति दिनु सरासर गलत छ। नियमअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।
Mitelash[ 2019-06-04 06:41:39 ]
NRB was publicised asaprofessional organisation time and again but their actions/inaction does not support that.
ARJUN[ 2019-06-04 04:42:26 ]
yesto suchana kasari out hunx? aba tyo bank lai aptharo pardaina? NRB le Bank ko name kina out gareko hola?